Wafdi ka socda Dal Afrikaan ah oo Maanta tegay Magaalada Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 5 April 2021
Wafdi ka socday dowladda Zambia oo uu hoggaaminayay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda dalkaas Gavin Lubinda ayaa duhurnimadii Maanta gaaray Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland.
Wafdiga Wasiir Gavin Lubinda oo uu kamid ahaa La-taliyaha gaarka ah ee Madaxweynaha Zambia ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha ee Hargeysa kusoo dhaweeyay Wasiir ku-xigeenka ahna ku simaha Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan.
Intaas kadib ayaa waxaa wafdiga loo gabiyay dhinaca Xarunta Madaxtooyada, iyagoona kulan gaar ah oo looga hadlayo Arrimo kala duwan la leh Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Wasiir Gavin Lubinda iyo La-taliyaha gaarka ah ee Madaxweynaha Zambia ayaa kulamo kale la qaadan sida uu qorshahu yahay Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Somaliland, waxaana la sheegay in ujeedka wafdiga uu yahay xoojinta xiriirka labada dhinac.